Iskuul ku yaalla Luuq oo laga dhaqangeliyay talooyinka ka hortagga Koroona - Radio Ergo
Iskuul ku yaalla Luuq oo laga dhaqangeliyay talooyinka ka hortagga Koroona
Ardayda oo si kala-fogaansho leh u fadhiya mid ka mid ah fasallada/Maxamuud Cabdirashiid/Ergo
(ERGO) – Iskuul ku yaalla degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa dhaqan-geliyay talooyinka caafimaad ee looga hortagayo faafiska cudurka safmarka ah ee Koofid-19. Tallaabadan ayuu qaaday markii sanadkii hore ardayda iskuulka qaar lagu arkay calaamado looga shakiyay inay yihiin cudurka.
Iskuulka oo lagu magacaabo Boyle ayaa labada gelin u kala qeybiyay ardayda dhigata oo gaaraya 280 qof si uu u yareeyo tirada markiiba ku kulmi karta toddobo fasal oo uu ka kooban yahay.
“Fasallada iskuulka markii horeba way iska yaraayeen. Fasalkii markii hore ay fariisan jirtay 30-35 cunug, waxaa hadda laga yaabaa 10 – 15 intay fariistaan,” ayuu yiri maamulaha iskuulka, Siyaad Maxamuud Salaad oo la hadlay Raadiyo Ergo.
Bishii Oktoobar ee sanadkii hore, shan ka tirsan ardayda iskuulka ayaa looga shakiyay inay qabaan Koofid-19. Dhaqaatiirta isbitaal ku yaalla deegaanka oo aan lahayn qalabka baarista Karoona ayaa dawooyn u qoray, kuna taliyay in muddo labo toddobaad ah lagu hayo meelo gaar ah.
Maamulaha iskuulka ayaa sheegay in ardayda calaamadaha cudurka looga shakiyay ay hadda xaaladooda caafimaad caadi ku soo noqotay. Hase ahaatee waxaa jiray carruur kale oo ay xanuunka uga shakiyeen, kuwaas oo uu xusay inay ula tacaaleen qaab looga hortagi karo inuu cudurka ardayda ku dhex faafo.
“Markii hore ee aan teeramka furaynay waxaa laga yaabaa toban cunug oo isla xanuunsan inay isla imaato, hadda alxamulillaah sidii way dhaamaan,” ayuu yiri Siyaad.
Ardaydu waxay xirtaan afka inta ay iskuulka joogaanna waxay u fariistaan labo labo, beddelkii ay afar qof ku wadaagi jireen kuraasta. Mar kasta oo ay iskuulka imaanayaan ama ay ka tagayaan waxay gacmaha ku dhaqdaan saabbuun ay ku caawisay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya.
Iskuulkan Boyle waxaa dhigta arday oo isugu jira barakac iyo danyar. Dhaqaale ay macallimiinta mushaarkooda ka jaraan oo dhan $60 ayaa labadii toddobaadba mar loogu soo iibiyaa 300 oo xabbo oo maaskaro ah.
Dugsigan hoose, dhexe ee Boyle si lacag-la’aan ah ayaa carruurta wax looga baraa. Hay’ad laga leeyahay dalka Norway oo magaceeda loo soo gaabiyo NCA ayaa ka taageerta bixinta mushaaraadka macallimiinta iyo qado ay ardaydu cunaan.
Waa dugsiga keliya ee gobolka ku yaalla ee laga hirgeliyay taxaddarka looga hortagayo Koroona.
Jimcaale Macallin Xassan oo ah 14 jir dhigta fasalka shanaad ee dugsiga dhexe ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in isaga iyo saaxiibbadiis ay dhab u qaateen digniinaha ku wajahan cudurka, sidaas daraaddeedna ay qoysaska soo barakacay ee la deggan xerada ay ku nool yihiin ee Busley ay u sheegaan muhiimadda ay leedahay in la raaco talooyinka caafimaad si loo xakameeyo halista cudurka.
“Karoona feyrusku inuu jiro xaafadaha dhan ayaan u sheegnaa Cudurku wuu ku faafaa dadka xaafadaha inay isla sheekeestaan oo ay isku imaadaan waxaan dhahnaa kala fogaada Karoona feyrus ayaa jiro, bahashana xirta,” ayuu yiri Jimcaale.
Beeralayda Baydhabo oo ku guuleystay goosashada dalayada markii ay iska difaaceen ayaxa